ESI EDOZI PASWỌỌDỤ MAKA AKAỤNTỤ WINDOWS 8 GỊ? - NJIKARỊCHA WINDOWS - 2019
Esi edozi paswọọdụ maka akaụntụ Windows 8 gị?
O doro anya na onye ọ bụla maara otú e si sụgharịa mkpesa PC - kọmputa nkeonwe. Isi okwu a bụ nkeonwe, n'ihi na onye nke ọ bụla ntọala OS ha ga-adị mma, onye ọ bụla nwere faịlụ nke ya, egwuregwu ndị ọ na-agaghị achọ igosi ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ Ọtụtụ ndị na-eji kọmputa eme ihe, ọ nwere akaụntụ maka onye ọrụ ọ bụla. Na akaụntụ dị otú ahụ, ịnwere ike ngwa ngwa tinye paswọọdụ.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị maghị banyere adị adị, ọ pụtara na ị nwere otu ma ọ dịghị paswọọdụ na ya, mgbe ịgbanyere kọmputa ahụ, ọ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka.
Ya mere, mepụta paswọọdụ maka akaụntụ ahụ na Windows 8.
1) Gaa na nchịkọta nchịkwa ma pịa ihe "ịgbanwe ụdị akaụntụ". Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
2) Na - esote, ị ga - ahụ akaụntụ akaụntụ gị. Na kọmputa m, ọ dị n'okpuru nbanye "alex". Pịa ya.
3) Ugbu a, họrọ nhọrọ iji mepụta paswọọdụ.
4) Tinye paswọọdụ na igosi ihe ugboro abụọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ihe atụ dị otú ahụ ga-enyere gị aka icheta paswọọdụ ọbụna mgbe otu ọnwa ma ọ bụ abụọ gachara, ma ọ bụrụ na ịgbanyeghị kọmputa ahụ. Ọtụtụ ndị ọrụ kere ma debe paswọọdụ - ma chefuo ya, n'ihi ihe ọjọọ.
Mgbe ịmepụtara paswọọdụ, ị nwere ike Malitegharịa ekwentị ahụ. Mgbe nbudata, ọ ga-agwa gị ịbanye na paswọọdụ onye nchịkwa. Ọ bụrụ na ịnweghị itinye ya ma ọ bụ tinye ya na njehie, ị gaghị enwe ike ịnweta desktọọpụ.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na onye ọzọ ejiri kọmputa na-abụghị nke gị, mepụta akaụntụ ọbịa maka ha na oke ikikere. Dịka ọmụmaatụ, nke mere na onye ọrụ ahụ gbanwere kọmputa ahụ, naanị ya nwere ike ile ihe nkiri ma ọ bụ egwu egwuregwu. Ngbanwe ndị ọzọ niile na ntọala, nrụnye na mwepụ nke mmemme - ha ga-egbochi!